Olwaluhlala whirlpools ezichazwe ifilimu abadumile, wenza esiqhingini abadumile nakakhulu kwegama elifanayo, ise-Pacific Ocean. Igama lakhe befika kusukela igama kohlobo olwandle ufudu ezinkulu. By the way, iziqhingi yaziwa ngokuthanda ezihlukahlukene enkulu yezimila nezilwane ezihlukahlukene. Lokho kuwufanele ukuza lapha, hhayi kuphela ukubheka ukuthusa olwaluhlala whirlpools. Kukhona izinto eziningi ezithakazelisayo.
Igama elithi "olwaluhlala" ihlanganisa nesishiyagalolunye yizicucu ezinkulu nezincane komhlaba elwandle eliKhulu iPacific. yoke imikhawulo kungokwalabo Ecuador futhi limemezela esiqiwini. Kukhona inani elikhulu mlilo eside damped, ngezikhathi asebenzayo futhi ithule. Kuyinto ngaphansi kwesivikelo inqwaba izilwane (kuhlanganise lendlovu izimfudu eziluhlaza, ulwandle izingonyama, ezingaphezu kuka-nanhlanu zezinyoni). Abanye abameleli nezilwane zitholakala kule ndawo kuphela.
Isici seziqhingi kuyinto indawo khona lapha ka imisinga ezinhlanu ezahlukene - efudumele futhi abandayo. Ukuxuba kubo kuholela yokuthi kukhona olwaluhlala whirlpools. Okuthathelwa kukho, kufanele kuphawulwe ukuthi ukuvelela amanzi ngisho asemigodini okuholela ukushayisana amabili notshwala lokushisa ezahlukene. Futhi uma kukhona ezinhlanu, bese omunye Akekho owaziyo mayelana amandla lezi eddies. Nokho, kufanele kusho ukuthi emhlabeni kukhona ezinkulu ngobukhulu futhi amandla uphondo amanzi (njengoba, ngokwesibonelo, etholakala eduze Japan noma Norway). whirlpools okunjalo ngempela yingozi hhayi kuphela izilwane zasemanzini, kodwa futhi ekutheni imikhumbi, kuhlanganise ezinkulu.
Ukuba khona e zaseGalapagos imisinga cool izimbangela futhi isimo sezulu sendawo. Isilinganiso lokushisa lonyaka esiqhingini kancane ngaphansana yini ejwayelekile lezi zindawo. Kumayelana amabili nane degrees.
I-Galapagos Islands nezimila yabo nezilwane eziye zahlolisiswa isikhathi eside. Ngezinye izikhathi ezahlukene bafeza esifundweni sawo Charlz Darvin futhi Thor Heyerdahl. Uyavuma ukuthi uma uhlela iholidi endaweni Galapagos Islands, uyofuna ukuhlanganyela ukuhamba nge izindawo lapho uhamba ezindla umbhalo imisebenzi yabo yesayensi abantu abanjalo abadumile.
Olwaluhlala whirlpools, ubunjalo bendawo, ezihlukahlukene izinhlanzi nezinyoni, sea izingonyama nezimvu zamanzi, izimfudu kanye iguanas minyaka ukuheha izivakashi ezivela kuwo wonke umhlaba. Iningi lazo eze lapha ukuze ungene. Diving e zaseGalapagos eletha kwalibaleka, kuletha omningi imizwelo eyakhayo futhi okuvelayo. Unyaka wonke kukhona Wabasaqalayo diving kanye nochwepheshe. imishini ezifanele kungcono ukuthatha naye kuleli zwekazi, kusukela cishe akunakwenzeka ukuthola iziqhingi. Abafundisi bayokujabulela ukukutshela abatshuzi imfundamakhwela zonke ezicashile nezilwane zasolwandle wendawo nempumuzo. Ngokwesibonelo, kwezinye izindawo okumelwe esatshwe, kanye nezinto ezidla - kukhona izinhlobo eziningana bhukuda oshaka anobuthi, imisebe futhi "iluma" induna. Ezinye izindaba zika-seholide olwaluhlala amathambo kahle futhi kungaba izaba wakho omkhulu ukuphazamisa isimiso umsebenzi nothuli ezisemadolobheni, kanye nesikhatsi lesijabulisako se- ukubona zibhukude iPacific. Siyakwamukela.
Osaka, Japan: izikhangibavakashi, ukuzilibazisa
Kusho ukuthini ukuba ukushefa e ebuthongweni bakho na? Dream ngokushefa: kwephupho amabhuku
Intel Pentium 4: izici, ukuhlolwa kanye nokubuyekeza
Art. 195 Ikhodi Criminal Procedure: "Inqubo ukuqokwa kokwahlulela"